Toa izany ve ny pejinao mamoaka famandrihana?
Talata, Martsa 11, 2008 Talata, Septambra 29, 2020 Douglas Karr
Nisoratra anarana tamina fampielezan-kevitra somary sarotra avy amin'ny orinasa iray miaraka amina tolotra maharesy lahatra aho. Ireo mailaka dia soratra tsotra fa nanana kopia lava be. Isaky ny mandray andraikitra amin'ny tranokalan'izy ireo aho dia mahazo atiny hafa mifototra amin'ny hetsika nataoko (na ny tsy fihetsika). Androany aho nahazo mailaka voasoratra tsara saingy nanapa-kevitra ny hiala amin'ny tolotra aho ary hiala amin'ny mailaka.
Ity no fomba fanaovam-beloma nataon'izy ireo:
Ouch! Ity no hafatra ao ambadik'ity, "nijanona tsy nilalao intsony ianao ka tonga any amin'ny mpitsentsitra manaraka… jereo!"
Raha tsy misy ny "see ya!".
Singa telo ho an'ny pejy fisoratana anarana tsy misy famandrihana:
Famandrihana miorina amin'ny andraikitra - Manolora famelabelarana miorina amin'ny lohahevitra fa tsy famoahana master. Mety ho tsotra toy ny hoe, "Nosakananao ny fisoratana anarana tamin'ity fanentanana mailaka ity, ity misy lohahevitra hafa mety hahaliana anao:" miaraka amin'ny tolotra hisafidy ny hafa. Azonao atao mihitsy aza ny manandrana mifehy izany.
Antony tsy famandrihana - Anontanio ny Faona! Nahoana izy ireo no tsy nisoratra anarana? Email be loatra ve? Tsy ampy? Tsy liana? Tsy misy fanentanana mailaka tonga lafatra, fa maninona ianao no tsy manontany ny fomba ahafahanao manao tsaratsara kokoa? Misaotra azy ireo nandray anjara ary nifona raha misafidy antony milaza izy ireo hoe: "minono ianao!".
Fanolorana fanampiny - Ampiasao daholo izany trano izany ho an'ny tolotra hafa! Aza manipy pejy fotsy fotsy lehibe amin'ity olona ity! Izy ireo dia tamim-pahalianana sy finiavana tamin'ny fotoana iray na tamin'ny fotoana hafa (rehefa nisoratra anarana). Maninona raha asehoy ny vokatra farany, ny serivisy, ny whitepaper sns? Ahoana ny momba ny mombamomba anao?
Rehefa niasa tamin'ny ExactTarget aho dia nampihatra an'ity rafitra ity ohatra amin'ny ankapobeny (ary ny marketing no nanao ny kopia sy ny endriny). Ny pejy dia misy fisaorana, blurb momba ny ExactTarget, rohy Demo manokana, ary koa ny rohy mankamin'ny sisa amin'ny tranonkalany!
Indraindray dia manomboka ny varotra rehefa mivoaka eo am-baravarana ny mpanjifa na ny fanantenana. Afaka manana fiheverana maharitra ianao, aza adino amin'ny pejy banga!
Tags: prectargetmaster unsubscribeesory ny pejy fandraisanapejy tsy hisoratra anarana
Ny lisitra fizahana bilaogiko…
Nisy zavatra ratsy tamin'ity fomba ity…
Mar 11, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Manontany tena aho hoe ahoana no mety handikan'ny raibeko sy ny renibeko (fa afaka an-tranonkala) hoe "nesorina" (mieritreritra izy ireo fa hahafantatra ny fomba hisoratany anarana na inona na inona. Nesorina tamin'ny Internet? Nesorina tamin'ny fifandraisan'izy ireo haingam-pandeha? Nesorina tao an-tranony? Azoko sary an-tsaina fotsiny ny fangatahan'izy ireo mangataka fanampiana….
Mar 11, 2008 ao amin'ny 5: PM PM
Heveriko fa tsara kokoa noho ny miteny hoe 'novonoina' na 'notapahina'. 🙂
Mar 11, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
Douglas, toro-hevitra tsara ity. Ny fisoratako anarana dia tsy hoe ratsy amin'ny lafiny rehetra, fa tsy mahavariana ihany koa. Manontany aho hoe maninona no nosoratan'izy ireo ary misaotra azy ireo namaky.
Fa heveriko fa hevitra tsara ny hamerenana mijery ilay pejy mba hahitana izay hitan'izy ireo ary hahazoana antoka fa izany no hafatra ilainao handao azy ireo.
Mar 11, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Ataoko fa ny "pejy veloma tsara tarehy" dia OK. Saingy azoko antoka tsy misy dikany izany raha tsy ampahatsiahivinao ny mpampiasa momba ny fampahalalana alefan'izy ireo.
Matetika, raha misy olona manelingelina mamely ilay rohy tsy misoratra anarana, vita ny fifanarahana.
Raha ny dinika iray manontany hoe maninona no tsy misoratra anarana ny mpampiasa dia tiako ny hahita statistika mivaingana momba ny famenoan'ny mpampiasa ilay takelaka sy izay lazain'izy ireo.
Izaho manokana, rehefa feno ny boaty na “Maninona ianao no miala” aorian'ny nanamafisako ny faniriako… Tsy miandry akory ny hamoahan'ny pejy aho alohan'ny hamelezako ny bokotra akaiky ny browser.
Manaiky aho fa ny unsubscribe angamba vita vita - ny tiako holazaina dia hoe afaka manohy manandrana sy manangana fifandraisana miaraka amin'ilay olona ianao ary manome azy ireo vokatra na serivisy hafa.
Raha ny marina dia heveriko fa fomba tsara iray hikarakarana pejy toa an'io ny fanaraha-maso ny fonosanao momba ny analytics ary hahitana hoe firy ny olona mifanerasera TAORIAN'ilay fisoratana anarana!